အနီရောင် Currant ၏ Marmalade - gelatin, zhelfiksom နှင့် Raspberry နှင့်အတူဆောင်းတွင်းအဘို့အချက်ပြုတ်နည်းများ,
အနီရောင် Currant ၏ Marmalade - အရသာရှိတဲ့ဂျယ်လီသကြားလုံးများအတွက်အကောင်းဆုံးချက်ပြုတ်နည်းများ
ပရိတ်သတ်တွေသီးအဘို့မုန့်ဖုတ်ဘို့ရသောအချိန်သည်ဆောင်းကာလ preform သို့မဟုတ်အဆာများအတွက်အလွန်အစွမ်းထက်တဲ့ option ကို redcurrant အား Jamming ပါလိမ့်မယ်။ ၎င်း၏ပြင်ဆင်မှုအတွက်အကျိုးရှိသောဂုဏ်သတ္တိများစောင့်မတော်မူကြောင်း, အရေးအကြီးဆုံးကတော့အလွန်ရိုးရှင်းသောဖြစ်တယ်, ။ အနီရောင် Currant တစ်ဦးအင်္ဂါရပ်ရှိပါတယ် - pectin ၏ကြီးမားသောငွေပမာဏကိုထည့်သွင်းကြောင့်ကောင်းစွာ gelled ။
အနီရောင် Currant ၏ယိုချက်ပြုတ်ဖို့ဘယ်လိုနေသလဲ?
Currant တစ်အရသာယိုစေရန်, အချို့ကိုသင်တစ်ခုလုံးကိုပြည့်ပြည့်စုံစုံထည့်သွင်းစဉ်းစားရန်လိုအပ်ပါသည်:
သငျသညျသီးစုဆောင်းရန်, အနီ Currant ၏ယိုချက်ပြုတ်ခြင်းမပြုမီ။ အချို့မှည့်သောအသီးကို ယူ. မလိုအပ်အသုံးပြုသောနှင့်နုနိုင်ပါသည်, သူတို့သည် ပို. ပင် pectin ။
စတင်, သငျသညျနှိုက်နှိုက်ချွတ်ချွတ်အတွက်သီးကိုဆေးကြောဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ အရေပြားအသီးဖျော်ရည်ထုတ်စီးဆင်းနိုင်ပါတယ်ပါးလွှာနှင့် Currant ကြောင့်ပြင်းပြင်းထန်ထန်စာနယ်ဇင်း, မလိုအပ်ပါဘူး။
အလျင်အမြန်သီးအခြောက်မှ, သင်ကခြောက်သွေ့တဲ့မျက်နှာသုတ်ပုဝါအပေါ်မှာထားရန်လိုအပ်သည်။ ထိုအခါသူတို့ထဲကတစ်ဦး juicer သုံးပြီးအားဖြင့်ဖျော်ရည်အလွယ်ကူဆုံး option ကိုညှစ်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်။
1: ထိုအခါဖျော်ရည်သကြား 1 အချိုးများ၏အချိုးအစားညီမျှသည်ဆက်ပြောသည်ဖြစ်ပါတယ်။
အဆိုပါ workpiece ရေအနည်းငယ်ထပ်ထည့်, မီးပေါ်တွင်တင်နေသည်နှင့်လုံးဝသကြားပျော်ဖို့ပြင်ဆင်နေသည်။
အဆိုပါဇွန်းအပေါ်မျက်နှာပြင်ပေါ်မှာမဆိုသဲလွန်စလိမ့်မည်မဟုတ်ပေရှိရာအမှတ်ချက်ပြုတ် Currant ။
ဒါကြောင့်အေးလာသောအခါ Marmalade redcurrant အဆင်သင့်ပင်ထူဖြစ်လာသည်။ ဒါဟာပူပိုးအိုးထဲသို့သွင်းထားများနှင့်တင်းကျပ်စွာအဖုံးဖွင့်လှိမ့်ရန်လိုအပ်ပါသည်။ ယိုမှန်ကန်စွာပြုသောအမှုသည်ဆိုပါက gelling ဖြစ်ပါတယ်။
အနီရောင် Currant ၏ Marmalade - အချိန်သည်ဆောင်းကာလများအတွက်စာရွက်
ချမ်းညဦးယံ၌မရှိမဖြစ်ဖြစ်လတံ့သောဂျယ်လီသကြားလုံး, - အနီရောင်တစ် Marmalade အချိန်သည်ဆောင်းကာလ၌ Currant ။ သူတို့စွန့်ပစ်နေသောပါဝင်ပစ္စည်းများ၏ပြင်ဆင်မှုကာလအတွင်းသူမကအခက်များနှင့်အတူချွတ်ချိုး, Currant ၏အသီးအပွထိခိုက်စေဖို့မဟုတ်ပါဘူး။ ဤငွေပမာဏ၏အစိတ်အပိုင်းများကို 300 ml ကိုချိုမည်။
Currant - 1 ကီလိုဂရမ်;
သကြား - 1 ကီလိုဂရမ်။
5 မိနစ်ကျင်းပသောအခါ, သီးတစ်ဆန်ခါကနေတဆင့်အပူနှင့်ပွတ်တိုက်ရာမှဖယ်ရှားပစ်ပါသည်။ ပျော့ဖတ်နှင်ထုတ်ခဲ့ပါတယ်ဖြစ်ပါတယ်ဒါမှမဟုတ်ဖျော်ရည်ထည့်သွင်းထားသည်။
အဆိုပါ 1: သကြားထပ်ထည့်ဖို့ 1 အချိုး။ သကြားဖျက်သိမ်းသည်အထိရရှိလာတဲ့အစုလိုက်အပြုံလိုက်ရောထွေးနှင့်မီးဖိုပေါ်မှာနေရာချစဖြစ်ပါတယ်။
ပူအရောအနှောအိုးသို့နှင့်ထူအနီရောင် Currant ယို၏သိုလှောင်မှုကာလအတွင်းသွန်းလောင်းခဲ့သည်။
gelatin ၏ Blackcurrant ယို
ယို redcurrant gelatin ပြင်ဆင်ပါကသာ3sosdaniya ပစ္စည်းအသုံးပြုသည်အလွန်ရိုးရှင်းပါသည်။ Currant ရှိတဲ့အကိုင်း၏သန့်ရှင်းခြင်းနှင့်ဆေးကြော, ရှိသမျှရေကသူတို့ကိုစွန့်ခွာသင့်ပါတယ်။ Marmalade မွှေး-အချဉ်အရသာနှင့်ကြွယ်ဝတဲ့အနီရောင်ရှိပါတယ်။ ဒါဟာလက်ဖက်ရည်နောက်ထပ်သို့မဟုတ်အစားအစာများများအတွက်အရသာ toppings အဖြစ်အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။
sahar- 1 ကီလိုဂရမ်;
gelatin - 1 အထုပ်။
ပွက်ပွက်ဆူနေသောရေနှင့်ပြီနောက်ဟင်းအတွက်, 1 မိနစ်များအတွက်သီးနှင့်အနာစိမ်းထားတော်မူ၏။
ထိုအခါ Currant အအေးနှင့်ကြိတ်တဲ့တတိယ။ mashed သီးဖျော်ရည်ကိုယိုစီး၏, ထိုအရည်အတွက်သီး၏ကျန်နှင့်အတူရောနှောသည်ကိုမီးပေါ်မှာထားတော်မူ၏။
gelatin Add နှင့်နောက်တဖန်ပြီးဆူအောင်တည်ဆောင်ခဲ့ရမည်။
ချက်ပြုတ်ရဲ့အဆုံးမှာနောက်ထပ်5မိနစ်အဘို့သကြားနှင့်အနာစိမ်းထည့်ပါ။
zhelfiksom နှင့်အတူ Confiture Currant
လျင်မြန်စွာအနီရောင် Currant ၏ယိုချက်ပြုတ်ရန်, စာရွက် zhelfiksa ၏ထို့အပြင်ပါဝင်နိုင်သည်။ ဤသည်ပစ္စည်းဥစ္စာကိုသိသိသာသာချက်ပြုတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်ကိုအရှိန်မြှင်ကြောင့်ဂျယ်လီအချိုပွဲစေရန်အလွန်အစာရှောင်ခြင်းဖြစ်နိုင်ပါသည် pectin အပေါ်အခြေခံသည်။ ဤကိစ္စတွင်ခုနှစ်, ယို zazheliruetsya မမျှသံသယရှိပါတယ်။
zhelfiks -2tbsp ။ ဌ။
ရေ - 10 ml ။
ပြုတ်ဖို့မီးပေါ်တွင်တင် zhelfiks, ထည့်ပါ။ အိုးထဲမှာမှည့်သောအနီ Currant ၏ပူ Marmalade သွန်းလောင်းခြင်းနှင့်ဖွင့်လှိမ့်။
အနီနှင့်အဖြူ Currant ၏ Marmalade
အလွန့်အလွန်စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့အဖြူသီးထည့်သွင်းပါဝင်သည်ရာယို Currant စာရွက်ပြင်ဆင်လော့။ ထိုအမျိုးနှစ်ဦးစလုံးတန်းတူအချိုးအစားအတွက်အသုံးပြုသောနိုင်ပါသည်။ pectin အဖြူ berry သီး၏အရေအတွက်အားဖြင့်၎င်း၏အနီရောင်ဝမ်းကွဲမှယုတ်ညံ့သည်မဟုတ်။ ချက်ပြုတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်ယိုရဲ့အဆုံးမှာကိုလည်းဂျယ်လီကဲ့သို့ရှေ့နောက်ညီညွတ်မှုရှိပါလိမ့်မယ်။
blackcurrant - 0.5 ကီလိုဂရမ်;
အဖြူ Currant - 0.5 ကီလိုဂရမ်;
, သီးဆေးအတွက် Blender မှတဆင့်ကိုချိုးဖျက်ဖို့, အသီးဖျော်ရည်ကိုညှစ်။
ပူပြင်းတဲ့အနီရောင်နဲ့အဖြူရောင် Currant ၏ယိုပိုးအိုးထဲသို့လောင်းအဖုံးနှင့်ဖော့ဆို့ကိုဖွင့်။
အနီရောင်နှင့်အနက်ရောင် Currant ၏ Marmalade
နောက်ထပ်လူကြိုက်များတဲ့လမ်း - blackcurrant ၏ယိုအောင်, သီးနှစ်မျိုး၏အသုံးပြုမှုကိုကပါဝင်ပတ်သက်ရသောအချိန်သည်ဆောင်းကာလများအတွက်စာရွက်: အနီရောင်နှင့်အနက်ရောင်။ သူတစုံတယောက်မျှမျိုးစိတ်များထံမှကိုပြင်ဆင်၎င်း၏အကျိုးရှိသောဂုဏ်သတ္တိများ, ကြောပိတ်ဆို့မှု, ယုတ်ညံ့သည်မဟုတ်ကာပုံမှန်မဟုတ်သောနှင့်ပြင်းထန်သောအရသာရရှိသည်။
ဘဏ်များအပေါ် Marmalade ထည့်ပါ။
Currant နှင့် Raspberry ၏ယို
ဆေးဖက်ဝင်ဂုဏ်သတ္တိများပင်ထက် သာ. ကြီးမြတ်သောသူစာရင်းခံစားပြုတ်ခဲဖွယ်စားဖွယ်ဖို့က Raspberry ထည့်သွင်းဖို့ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ အောင်ဘယ်လိုကြော် Currant နှင့် Raspberry ၏ယို အလွန်အစာရှောင်ခြင်းနှင့်ယုံကြည်နိုင်လောက်အောင်အရသာရှိတဲ့ဟင်းပေးပါလိမ့်မယ်။ Marmalade 1 နှစ်၎င်း၏ဂုဏ်သတ္တိများနှင့်အရသာဆက်လက်ထိန်းသိမ်းထားဒါကြောင့်လုံခြုံစိတ်ချစွာဆောင်းရာသီမှာအဘို့သိုထားနိုင်ပါတယ်။
Raspberry - 500g;
Currant - 200g;
gelatine - 15 ဂရမ်,
သကြား - 800 ဂရမ်
gelatin နှင့်2ဇွန်း။ l ။ သကြားသီး၏အလေးချိန်မှဆက်ပြောသည်။
မီးပေါ်တွင်တင်ပြီးဆူအောင်တည်ဆောင် ခဲ့. ထို့နောက်သကြားထည့်ပါ။ မီးပေါ်မှာမိနစ်အနည်းငယ်အဘို့အ Hold နှင့်အအေးထားလေ၏။
multivarka အတွက်အနီရောင် Currant ၏ Marmalade
မီးဖိုချောင်အတွက်လုပ်ငန်းစဉ်များအများအပြားလွယ်ကူချောမွေ့နိုင် Mulvarka ။ ဒါဟာချက်ပြုတ်နိုင်ပါတယ် ယို Currant 1: 1 ၏ပုံမှန်အချိုးအတွက်သာသီးနှင့်သကြားကိုသုံးပြီး gelatin မပါဘဲအနီ, ။ အိမ်ရှင်မအချဉ်ရဖို့လိုလားလျှင်, ကျွန်တော်အနည်းငယ်လျော့နည်းသကြားကိုယူနိုင်ပါတယ်။ ထမင်းချက်စက်ပစ္စည်း၏ပွင့်လင်းအဖုံးဆကျဆံတယျ။
တစ်ဦးပျော့ဖတ်မှကြိတ်ဆုံနှင့်ကြိတ်နှင့် device အတွက်ထားရန်အေးပွီးနောကျ, သကြားထည့်ပါ။
ယိုကိုပြုတ်, အဲဒီနောက် "ထွက်ခြင်း" mode ကိုပြောင်းရန်နှင့် 40 မိနစ်ချက်ပြုတ်ဖို့စတင်သည်သည်အထိ "မုန့်ဖုတ်" mode ကိုဖော်ထုတ်။
အနီရောင် Currant ၏ဟင်းချက်ယိုသူဘဏ်များနှင့်လိပ် lids သို့သွန်းလောင်းဆိုတဲ့အချက်ကိုအားဖြင့်ပြီးစီးခဲ့သည်။
ဆောင်းတွင်းအဘို့ပန်းသီး cider ရှလကာရည်နှင့်အတူသခွားသီး - ချက်ပြုတ်နည်းများ
အချိန်သည်ဆောင်းကာလ၌ပျော့ဖတ်နှင့်အတူ Plum ဖျော်ရည်
Herring pickle ဖို့ဘယ်လိုနေသလဲ?
ကစီဓါတ်ကနေ Kissel - စာရွက်
သားသမီးတို့အဘို့ဗီတာမင်။ သားသမီးတို့အဘို့တိုးတက်မှုနှင့်ကိုယ်ခံစွမ်းအားများအတွက်ဗီတာမင် - ကိုအကောင်းဆုံးအဆင့်သတ်မှတ်ချက်
အိမ်တွင်းဒိန်ခဲနှင့်အတူမုန့် - pastries အဘို့မုန့်စိမ်းနှင့်ဖြည့်စွက်၏အများဆုံးအရသာချက်ပြုတ်နည်းများ
သင်္ကေတပြ - တနကျယ်ကောင်များကကိုက်
အီတလီ, Lido di Jesolo
အားပေးစေရန်လှုံ့ဆော်ခြင်း - ကဘာဝတ်စုံ, ကခုန်, အားပေးစေရန်လှုံ့ဆော်ခြင်းပြိုင်ပွဲ
အလှဆင်အင်္ဂတေ - ခေတ်သစ်မျိုးစိတ်နားလည်ဖို့ဘယ်လို?
ဂေါ်ဖီထုပ် pancakes - စာရွက်
ဗီတာမင် K သည် - ထိုသို့ကဘာလဲ?